फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - के तपाइँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ ?
के तपाइँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ ? गायत्री परिरोशनी
हैन भने पनि तपाइँहरू पत्याउनुहुन्न, जुनसुकै मानिसहरूलाई पनि जन्मेपछाडि अगाडि बढ्न मन लाग्छ । आफ्नो हैसियत, सीप, क्षमता भएकाहरूलाई मात्र भए त ठिकै हुन्थ्यो गाँठे त्यो भन्दा पनि बढी मन त अझ ढङ्गको ‘ढ’, लगनको ‘ल’, सीपको ‘स’ पनि नभएकाहरूलाई झन् बढी मन लाग्छ । म आफैलाई सोध्नुभयो भने पनि के–के कुरामा अगाडि बढ्न मन लाग्छ भनी प्रश्न तेर्साउनुभयो भने खुलेआम भनिदिन्छु है त मलाई के–के कुरामा अगाडि बढ्न मनलाग्छ । पोल खोल्नु–खोल्नु किन अर्काको खोल्नु आफ्नै पोल सुनिहाल्नुहोस् ल ।
बुर्जुवा शिक्षाको काम छैन भनेको सुन्ने गरेको हुनाले अङ्ग्रेजी र नेपालीको सावा अक्षर सिक्ने झन्झट नै गरिन तर पनि कुराले त अहिले विद्यावारिधि गरेकाले भन्दा पनि अगाडि बढ्न मन लाग्छ । मनै त हो, लागे पछाडि किन पछाडि हट्ने, अगाडि जानकै लागि भन्दिन्छु– पढेर डाउटर भएकाहरूले त एउटा ट्याब्लेट बनाउनुपर्दछ,त्यस्तो ट्याब्लेट कि त्यो खाएपछाडि विद्याकी देवी सरस्वती माता मुखमा उत्रिऊन् । मेरो यही नम्बरी कुरामा साथ दिनेहरू तमाम निस्केका छन् अहिले । यस्तै यस्तै कुरामा साथ दिनेहरू कोही पनि पछाडि फर्केका छैनन्, अगाडि नै दन्केका छन् ।
नीतिका कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि मैले कहिल्यै पनि आफ्नो नीति र घरको नीतिको बारेमा केही पनि जानिन भने राजनीतिको त कुरै नगर्नुहोस् तर पनि आधुनिक जमानाको असल नेता बन्ने रहरले काउकुती लगायो । रहर नै त हो, काउकुती नै लगाएपछाडि कसले पो खप्न सक्थ्यो र ? दुई–चार दिन हाम्रै पुर्खाहरू बस्ने गरेको जङ्गलतिर दौडिन, लर्न, फदाल्न, चोर्न, हर्न के–के सिकेको थिएँ, नेता मात्र कहाँ हो र हजुर एक नम्बरको आधुनिक मन्त्री बनेर अगाडि बढिहालेँ ।
निर्माणको कुरा गर्दा पनि लाज लागेर आउँछ, आजभोलिकाले जस्तो दिनदिनै धारा, पाटी, पौवा, गौवा, टौवाको निर्माण होइन मैले एउटी खोजेर छोराछोरीको निर्माण पनि गर्न सकेको छैन । तापनि मन नै त हो नि संविधानको विशाल धारो निर्माण गर्न मन लाग्यो । मन नै लागेपछाडि छेक्ने कस्को बाउको तागत । एउटा ठूलो सेमिनार हलमा सुट, बुट र टाईमा छिरेको मात्र के थिएँ, सानोतिनो पदमा कहाँ हो र हजुर त्यही विशाल संविधानको धारो निर्माण गर्ने हेड अफिसको अध्यक्ष बनाइहाले ।
तपाइँहरूलाई पुरापूर थाहा छ नि है जमाना अगाडि बढ्नेहरूकै हुन्छ, रमाना अगाडि बढ्नेहरूकै हुन्छ । अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ काम धेरै गर्नुपर्छ, परिश्रम धेरै गर्नुपर्छ, मेहनत धेरै गर्नुपर्छ,लगनशील बन्नुपर्छ त्योभन्दा पनि धेरै त अझ धेरै पढ्नुपर्छ यी सबै वाहिघात बकम्फुसे कुरा मात्र हुन् । एउटा मात्र याद राख्नुहोस् अगाडि बढ्नको लागि त यी यावत सबै छोडेर मात्र कुरा धेरै गर्नुपर्छ, कुरा राम्रा गर्नुपर्छ, कुरा ठूला गर्नुपर्छ,, कुरा पूरा गर्नुपर्छ, अनि बल्ल बढिन्छ अगाडि, अनि बल्ल परिन्छ अगाडि ।
यदि तपाइँहरूलाई पत्याउन अप्ठ्यारो लाग्छ भने हाम्रै इतिहासलाई हेर्नुहोस्, हाम्रै वर्तमानलाई हेर्नुहोस् । देशको लागि लड्ने, देशको लागि राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत भई काम गर्नेहरू गोली खाएर मरेकै हुन्, धेरै धेरै पढेर, लगनशील बनेर ठूला मान्छे बन्न खोजेका भोककोटा र रोइरव अर्यालजस्ता थुप्रै मान्छेहरू भोकले छट्पटिएर मरेकै हुन् । त्यसै बेलामा त्यसै समयमा फजुल कुरा गर्नेहरू, दुनियाँको जीवन हर्नेहरू अगाडि परेकै हुन् । इतिहास तिनीहरूकै छ । इतिहास मात्र कहाँ हो र हजुर वर्तमान पनि उनीहरूकै मुनिहरूको छ । कसरी प्रश्न माथि प्रश्न तानिदिनुभयो भने पनि म तयार छु नि है जवाफ दिनलाई । अँ, कुरा के भने एउटा चोकमा ठूलो जमघट गरेर अगाडि बढ्नको लागि, ठूलो मान्छे बन्नको लागि नगरी नहुने कुरा के हो ? भनेर सोध्नुभयो भने सारा बच्चाहरूबाट समेत तोते बोलीमा सुन्न पाइन्छ, नेपाल बन्द गनुपर्छ, सडक जाम गर्नुपर्छ, पानी नआउने धाराहरूमा रित्ता गाग्रीहरूको लाम गर्नुपर्छ, कति बेलै पनि लाइन नआउने रात्रीमा लक्ष्मीपूजाको पूण्यधाम गर्नुपर्छ । कुरा ठिक नै हो अगाडि बढ्नको लागि, अगाडि चढ्नको लागि । यिनै बन्द गराउन सक्ने अनुभवीहरू नै अहिले बन्द मन्त्रालयको प्रमुख भएका छन् । पानी नआउने धारामा महिनौँ दिनसम्म कुरेर बस्न सक्ने नै पुनः तिनै रित्ता धाराहरूको निर्माणमा जुटेका छन्, नयाँ नेपाल बनाउने आश्वासनमा पुरानो नेपाललाई भुटेका छन् ।
हो साँच्ची सबैलाई अगाडि बढ्न मनलाग्छ । सबैलाई अगाडि चढ्न मनलाग्छ । त्यसको लागि हालको जल्दोबल्दो उत्तम उपाय हो कुरा मिठो गर्ने, कुरा ठूलो गर्ने, काममा सिन्को नभाँच्ने, काममा माखो नमार्ने । तपाइँहरू पनि अब त खुलेआम अगाडि बढ्न थाल्नुभए हुन्छ । नडराइकन भन्नुभए हुन्छ, हामीले त अब कहीँ पनि नभएको जस्तो, विश्वकै नौलो नयाँ नेपाल बनाइदिन्छौँ । गाँउमा पानीको धारो नआएर कोही आत्तिनुपर्दैन, संविधानको विशाल धारो निर्माण गरिदिन्छौँ । चौबीसै घण्टा लोडसेडिङ भए पनि पिर नमान्नुहोस्, आजको यति दिन भित्रमा यति मेघावाट विद्युत निर्माण गर्छौं । अनि त तपाइँहरूको मान बढिहाल्छ, शान बढिहाल्छ । अनि फेरि सुन्नुहोस् है त कसैले किन त केही पनि नगरेको, खालि हिंसा, हत्या, अराजकताका काम मात्र गरेको भनेर प्रश्न तेर्साए भने नडराइकन, नहडबडाइकन बताउनुपर्छ कि हामीले गर्ने थियौँ राम्रो काम तर हाम्रो एकलौटी अधिकार छैन, प्रतिपक्षले केही पनि गर्न दिदँैनन्, एउटा दल मात्र प्रतिपक्ष भएको भए त केही हुँदैनथ्यो तर हाम्रो दलबाहेक अरू सबै दलहरू प्रतिपक्ष भएका छन् । यी सारा गल्ती गरेको हामीहरूले होइन प्रतिपक्षहरूले हो, यति भनिसक्दा पनि अझै सचेत बन्नुहोस्, अझै प्रश्न गर्न सक्छन् । अँ हँ प्रतिपक्षलाई मात्र दोष देखाएर उम्कन पाउनुहुन्न भनेर कहीँ कसैले भनिहाल्यो भने पनि नआत्तिइकन भन्ने गर्नुहोस् कि यति साह्रै राम्रो कुरा गर्दा पनि तपाइँहरूले पत्याउनुहुन्न भने म मेरो घरभित्रै मेरो आफ्नै काम गर्दागर्दै सहिद बन्न तयार छु, बलिदान हुन तयार छु । अनि त नपत्याउने कसको तागत छ हँ ?
जोईपोइ को ठू??
दामी होस्टेलका नामी नियम
गोदी सरकारको बन्दी व्यापार
भूकम्प, पीडित र राहत
फित्कौलीलाई खुला पत्र
मन बूढो भए पो !
मान्छे पनि केटाकेटीजस्ता हुन्छन् र ?
उत्कृष्ट वाद अवसरवाद
© COPYRIGHT 2020 Fitkauli सम्पादक प्रकाशक : नरनाथ लुइटेल ईमेल : narnath@gmail.com कार्यलय ठेगाना : का.म.पा कलंकी १४ सम्पर्क नं : 9841521748